About Us - Green Ukudla Pack Co., Ltd.
Double odongeni inkomishi
Iphepha Isinkwa Bag
Plastic isikhwama isinkwa
Ikhekhe Ilebula Sticker
Coffee cup Umnikazi
Umkhono we coffee cup
Greenfoodpack Co. kuyinto nomkhiqizi professional Chinese ekufakeni izinto amabhikawozi, ehhotela, candy izitolo kanye efanayo ezitolo okukhethekile. Siyaziqhenya benikela ezihlukahlukene imikhiqizo Eco- friendly ukuthi akuzona enhle kuphela, kodwa kulula ukuyisebenzisa.
Ukwakha umkhiqizo wakho, ngezifiso isevisi ODM iyatholakala njengoba ngamunye target emakethe wakho, ne MOQ nezimo kwesilingo ukuhleleka izinto eziningi. amabhikawozi Manje Greenfoodpack iye yasiza, ihhotela nezinye ibhizinisi service ukudla ukufeza eziseceleni ephakeme. Ngazo zonke izikhathi zonyaka, wonke amaholide, ngaso sonke isikhathi. Quality, umklamo kanye inkonzo ukubeka Greenfoodpack ngaphambi emkhakheni.
Njengoba inkampani ikhasimende ngamakhasimende, Greenfoodpack ulwela ekubeni embonini emaphaketheni. Sizinikele empumelelweni yakho ngokunikela isixazululo esingcono kakhulu nokunikeza esezingeni emaphaketheni kanye kwamakhasimende ozinikele.
Amadivayisi: Donghuan Industrial Park, Donghuan Road, Panyu District Guangzhou, China
Umhlahlandlela - Hot Products - Ibalazwe - AMP Hambayo
Iphepha Cup, Hot Cold Cups, Plastic Isinkwa Izikhwama , Kraft Paper Straws, Ikhekhe Pop Amabhokisi , Elanyatheliswa yenkampani yenethiwekhi Izikhwama ,